संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो ★ बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली'★ प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ६, २०७३
लेखक : बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली' विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या : 12 प्रकाशन मिति : बुधबार, पुस ६, २०७३ रेसुङ्गा नगरपालीका वाड नं १, तम्घास गुल्मीका बाबुराम पन्थी पन्थी हाल चीनको मकाउमा हुनुहुन्छ । ईमेल ठेगाना - bgomrr@ gmail.com बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली'का अरु रचनाहरु धेरै वर्ष घर बाहिरको बसाइ पछि त्यो साल केही लामो समयको लागि घरमै थिए । भर्खर घर बनाएर नयाँ घरमा सरेका थिंयौ । माघको महिना पहाडमा निकै चिसो थियो । माथि रेसुड्गाले पुष माघ भरी बादलको टोपी नलगाएको दिन हुँदैन । पूर्वमा अग्लो रेसुड्गा र पश्चिममा अग्लो अर्जुन डाँडाँकोहरू त्यहाँका सुन्दरता थप्ने गहना हुन । तम्घासमा यी दुई महिना घाम मुस्किलले देखिन्छ । उत्तर पट्टी आलीशान गगन चुम्बी सेता हिमशैलको ताँती, संसारको डिभाइडर बनेर बसेको अन्नपूर्ण हिमश्रिड्खलाबाट सिधै ठोक्कीन आइपुग्ने कठ्याड्ग्रिने चिसो ।
बादलका बुँदहरू पनि कठाँड्ग्रिएर आफ्नो श्वरूप परिवर्तन गर्दै पृथ्वीतलमा अस्तित्व बचाउन पवनको झोंकसँग आत्म समर्पण गरेको त्यो दिन ! प्रकृतिलाई हेमन्तले दिएको उपहार त्यो सेतो खाष्टो ! वर्षौको बिछोड पछिको हाम्रो मिलनमा प्रकृति बेजोड खुशी भई एउटा आयाम थपेको हुनु पर्छ, हाम्रो खुशीसँगै प्रकृतिले ! छिमेकी बुज्रूकहरू भन्नु हुन्थ्यो साठी वर्ष पहिलेतिर परेको थियो यती तलसम्म र यती बाक्लो हिंऊ ।
रेसुड्गा र अर्जुनको डाँडाको शिर देखी तम्घास बजार र आसपास क्षेत्रमा समेत हिंऊ परेको थियो । मानिसहरू हिंऊमा खेल्न रेसुड्गाको शिरमा पुग्नु पर्थ्यो तर आज आफ्नै घरका छतहरू मै हिंऊमा खेल्न पाएको त्यो दिन निकै रमाइलो थियो । प्राकृतिक त्यो सुन्दरता कैद छ स्मृतिमा ! गीता र म पनि त्यो रमाइलो पल विना कुनै अबरोध हिंऊमा घरको छतमा निकै खेलियो । जीवन जिउनुको सार्थक आभास मिलेको त्यो दिन सारा संसार आफ्नै पक्षमा थियो जस्तो लागेको थियो ।
हिंऊ खेल्दै गर्दा गीताले भनिन् आहा यस्तो समयमा त एउटा फोटो खिचाउनु पाए आजको दिनको चिनो हुने थियो बुढा । हो मेरो मनमा पनि त्यो सोंच नआएको काँहा हो र तैपनि अन्जान र ख्यालै नभएको जसरी बुढीले नभने हुन्थ्यो भन्ने सोंचिरहेको थिँए । उनले आफ्नो रहर रकेर राखिनन् । उनले भनेपछि म पनि हो त है साँच्ची भन्दै उनको कुरालाई समर्थन जनाए, तर मसँग नत क्यामेरा नै थियो न त त्यति खेर साथमा भएको मोबाइल फोनमा क्यामेरा नै थियो ।
मलाई मन भित्र चसक्क लाग्यो कस्तो जिन्दगी, श्रीमतीको यती सानो चाहना पनि पुरा गर्न सकिन, अन्तत फोटो खिच्न सकिएन । आजसम्म पनि त्यो दिनका ती दृश्यहरू पटक पटक फेल्यासब्याकमा आइरहन्छन् । खै प्रकृतिले आजसम्म फेरि त्यसरी हिंऊ पारेको छैन, तैपनि म प्रकृतिले त्यै दिन पुन: आगमन गराउने छ भन्ने विश्वासमा फोटो खिच्ने अधुरो सपना पुरा गर्ने प्रतीक्षा मै छु ।
बाबुराम पन्थी ‘गुल्मेली’
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान छोक सागओल दोस्तलार मेरो प्यारो ओखलढुंगा सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com